प्रहरीले शालिकराम प्रकरणलाइ ३ कोण बाट हेर्नसक्छ। - Sagun Siwakoti
HomeArticlesप्रहरीले शालिकराम प्रकरणलाइ ३ कोण बाट हेर्नसक्छ।
अहिले शालिकराम पुडासैनीको मृत्यु र रवि लामिछालाइ सोधपुछको लागि पक्राउ गर्नु देशकै गम्भीर बिषय बनेको छ। प्रहरी सङ अनुसन्धानको लागि रवि, अस्मिता र युवराजलाइ सोधपुछ बाहेक केहि अरु उपाय पनि छैन। यो हत्या हो की? आत्महत्या हो की? कुरा खुल्न जरुरी छ। यदी प्रहरीले राम्रो अनुसन्धान गर्यो भने एक चर्चित पत्रकार को इमेज खराब हुनबाट जोगिन्छ। यस मुद्दमा राजनितीकरण गर्नु त झन खराब हुनेछ। र न्युज २४ र माउन्टेन टिभिले पनि बयान दिएर अनुसन्धान सजिलो पार्नु पर्छ। यसरी यो केसलाइ तीन कोणबाट हेर्न सकिन्छ।
१) डिप्रेशन र आत्महत्या – डिप्रेशन एक भयानक रोग हो। यो दुइ प्रकारको हुन्छ क्लिनिकल र सिचुएसनल। क्लिनिकल भन्नाले जन्मजातनै मानिस निराश भइराख्ने र सिचुएसनल भन्नाले कुनै कारण बस त्यसतो हुनु। शालिकरामजी लाइ डिप्रेशन थियो कि थिएन र उनको डिप्रेशन कस्तो प्रकारको थियो त्यो बुझ्न जरुरी छ। यदि क्लिनिकल डिप्रेशन हो भने सानो कुराले पनि ठुलो चोट पर्न सक्ने हुनसक्छ।
२) परिस्थिती र प्रेसर – शालिकरामजी भारी रिण र काम गर्ने ठाउको प्रेसरले छटपटिरहेको भिडियोमा देख्ना पाइन्छ। त्यसमाथि एक स्त्री सङ मिलेर अस्ट्रेलिया जान लागेको पनि स्विकार गरेको देखिन्छ। त्यस कारणले उनले डिप्रेशनको मुख्य कारण उनको रीण, उनले प्रेम जिवन र उनीमाथि कार्यलयमा हुने व्यवहार, अथवा उनलाइ साचै बलात्कारको चक्करमा फसाउने थियो त्यो पनि बुझ्नन जरुरि छ। र उनको डिप्रेशनको कारण रिण हुनकि कार्यलयमा हुने व्यवहार त्यो जान्न अनेक कर्मचारीको बयान लिन सकिन्छ। र अरु कसैले साचै रविले फसाउन लागे भनेर ढाटेको पनि हुन सक्छ। के साचै रवि र युवराजले उनी माथि नाराम्रो नै व्यवहार गर्थे या उनको डिप्रेशनले उनलाइ सानो कुरा पनि ठुलो रुपमा देखाउथ्यो वरिष्ठ साइकोलोजिस्ट सङ बुझ्न पनी जरुरी छ।
३) नियोजित हत्या – कसैले रविको छवि बिगार्न र शालिकरामजी सङनै बदलाको भावनाले गरेको केस पनी हुन सक्छ। तर सायद मार्छनै भन्ने थाहा भएपछि कसैले सुसाइड नोट बनाउन भन्दा पनी झगडा गरेर घाइते बनाउने सम्भवना बढी होला। तर पनि पत्रकार भएको कारणले कसैले रिसीबी निकालेको पनी हुनसक्छ।
यस समय प्रहरी सङ पनी भिडियो मा उनले नाम लिएका मानिस बाहेक अरुलाइ सोधपुछ गर्ने ठाउ छैन। र रवि आफैले पनि त्यो अनुसन्धानमा मदत गर्ने भनिसकेको छन। त्यसैले अनुसन्धान सुरुनै नभइ आन्दोलन र जुलुस निकाल्नु उचित छैन किनकी रवि आफैले अनुसन्धानमा सघाउने भनिसकेका छन।
8063total visits,26visits today